U-SPOCK UXELELE UPICARD MALUNGA NOMICHAEL BURNHAM KUNYE NOKUFUMANISA - IINDABA
U-Spock uxelele uPicard malunga noMichael Burnham kunye nokuFumanisa
Incwadi entsha enephepha mvume i-Star Trek e-book ebhalwe ngumbhali wefandom u-Una McCormack uphendula umbuzo abathe abalandeli baxakeka ngawo ixesha elide. Iminyaka, abalandeli be Star Star: Ukufumanisa bafundise ukuba uKapteni uJean-Luc Picard kufuneka azi ngokubhekisele kubukho bukaMichael Burnham kunye neziganeko ezadlulayo kwi-USS Discovery ngenxa yokuxakaniseka kwakhe noSarek, utata kaSpock. , Owayekwazi kakuhle okwenzekileyo enqanaweni kunye nabasebenzi bayo.
Ukuphela kwexesha lesibini lokuFumanisa kutyhile ukugquma okuchaze okokugqibela ukuba kutheni kungekho mntu kwi-Star Trek sequence eyaziyo ngokubhekisele kwi-USS Discovery. Xa abasebenzi be-Discovery bazimisele ukutsiba ixesha elide ukunqanda ukuchitha indalo iphela, abantu abashiyekileyo, kunye nomntakwabo Burnsh u-Spock, bathembisa ukubuyisa ukunyamalala kwenqanawa. Kuba ukuFumanisa kwakubhalele ukwazi, i-Starfleet yenza yonke idatha enxulumene nenqanawa enelebheli.
Ke, xa i-Star Trek: Isizukulwana Esilandelayo sidlulile, ngaphezulu kwenkulungwane kamva, kwavakala ukuba akukho mntu waziyo malunga nokuFumanisa okanye abasebenzi bayo, nangona uBurnham wayengudadewabo kaSpock.
Incwadi kaMcCormack, I-Autobiografi kaMnu Spock, ekugqibeleni ityhila ukuba uPicard okanye hayi uPicard uyazi malunga neBurnham kunye neDiscovery, nangona kunjalo ayisiyo mpendulo abalandeli abaninzi baxela kwangaphambili.
rick kunye nodaka olupheleleyo
U-Spock uxelele i-Picard Yonke into
Abalandeli be-TNG bayazi ukuba u-Ambassador Spock kunye no-Captain Picard badibana nomntu ngamnye ngexesha eliphambili ngezihlandlo eziboniswe kwiCandelo loBumbano I kunye no-Unification Part II. U-Picard wanceda u-Spock kunye neenzame zakhe zokudibanisa iVulcans kunye ne-Romulans, bephanzisa iyelenqe lase-Romulan apha phakathi. Emva koko, ezi-2 zikhule zangabahlobo abavaliweyo.
Kwintshayelelo ye-Autobiografi kaMnu Spock, ebhalwe ngaphakathi komntu wokuqala ngokwembono kaSpock, uSpock utyhila ukuba urekhoda imemori yakhe kubabukeli be1 - umhlobo wakhe olungileyo uCaptain Picard. Kuba wayebhalela umhlobo olungileyo wabucala, uSpock wabelana ngalo lonke ushicilelo oluncinci lobomi bakhe kuyo yonke i-e-ncwadi, kwa ezi wafunga ukuba ngekhe abelane naye nabani na; Nditsho nokuprintwa okuncinci kobudlelwane bakhe kunye nodadewabo omkhulisayo kunye nemishini awayeyenzile ukunqanda ukuchitha umhlaba. Ke, ngokungathandabuzekiyo uPicard wayesazi malunga noBurnham, ubuntwana bakhe eVulcan, kunye nemisebenzi awayeyithathile njengelungu labasebenzi kwiDiscovery.
U-Nick fury waphulukana njani neliso lakhe kwii-comics
UPicard wayengumntu ongekho esidlangalaleni, kwaye wathatha isibindi sabahlobo bakhe kakhulu. Ke, kusengqiqweni ukuba akazukutyhila ulwazi lakhe ngobomi babucala bukaSpock kuye nakubani na. Ukuthula kwakhe ukongeza kunengqondo kwimeko yokuba ligosa le-Starfleet elizinikeleyo ngaphezu kwayo yonke enye into kwaye ngekhe anqwenele ukuveza into iqela ebelibona ukuba libhaliwe.
Ukubaliswa kwakhona koBomi bukaSpock
I-Autobiografi kaMnu Spock ubalisa ibali lobomi bukaSpock ethathela ingqalelo lonke ulwazi olunikezwe kwimiboniso yelifa leStar Trek ukongeza kwimiboniso yeStar Trek yale mihla.
U-Spock uxelela uPicard malunga nodadewabo omkhulisayo, ebalisa ngalo lonke unxibelelwano ebelungqinisisiwe ekufumaneni. Nangona kunjalo, i-e-ncwadi iyongeza imbeko kwi-canon eyaziswa yimiboniso eyahlukileyo. Ibali likaSpock's kahs-wan, elalibonakaliswe ngaphakathi kweStar Trek: Isiqendu se-Animated Series Yesteryear, sinokuba ngaphakathi kwe-e-ncwadi. Iipoks zithetha ngezihlandlo eziboniswe kwi-Star Trek: Uthotho lwantlandlolo kunye nezihlandlo ezaziboniswe ekuFumaniseni nase-Star Trek: Iifutshane eziFutshane. Ude athethe ngamathuba aliqela aboniswe kwiJJ. Iifilimu zeAbrams Trek.
I-Autobiografi kaMnu Spock ngumxube wokwenyani wazo zonke iintsomi abalandeli bakaTrk abakhe babona malunga noSpock. Nangona oku kunokuqhubeka kucola abanye abalandeli ngendlela ephosakeleyo, ngakumbi abo bakhetha ukunyanzelisa ukuFumanisa kwenzeke kwelinye ixesha elifanelekileyo, inika impendulo eqinisekileyo malunga nokuba ingaba imiboniso yeTrek yanamhlanje ikwe-canon efanayo na kuba imiboniso yelifa.
Nangona kunjalo, iincwadi ze-Star Trek ngamanye amaxesha zicingelwa ngaphandle kwe-Star Trek canon esemthethweni. Izihlandlo zeencwadi azikhe zithethwe ngazo ngaphakathi kwimiboniso kwaye zihlala zicingelwa eyazo i-canon. Ukuba kunjalo, i-Autobiography kaMnu Spock ayizukuveza nasiphi na isisombululo esisemthethweni.
Njengayo yonke imiba ngaphakathi kweTrekverse, abalandeli baya kuzisombululela ngokwabo ukuba azifanelekanga okanye hayi iisuti ze-e-ncwadi ngaphakathi kwi-canon yabo yabucala yeTrek.
Izigaba: Amazon-Prime Umqala Inetflix
melissa joan hart kunye nomark wilkerson
Ngaba kukhona ukuhanjiswa kweposi ngosuku lwecolumbus?
mde kangakanani iijules
Usuku lokusebenzela oluvulekileyo lwe-fedex
kufutshane kakhulu ngentuthuzelo netflix
Iiyure zeedola zomthi ngePasika ngeCawa